ဆန္ဒပြပွဲတနင်္ဂနွေ 10/11 19:00: ခိုလှုံခွင့်နေထိုင်ရန်, ဘရော့ဒ်ဘန်းများနှင့် Mack | Holmbygden.se
Holmes ခရိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, #ShepherdsHut – #holmbygden
ပံ့ပိုးမှု Holmes SK ကို (အခမဲ့) သငျသညျဆှီဒငျဂိမ်းကစားသည့်အခါ!
Holmes Fiber စီးပွားရေးဇုန်အစည်းအရုံး
Holmes ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာသမိုင်း Society က
Drakabergets SK ကို – မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စနိုးမိုဘီလ်
ဗိုက်ကင်းအကျိုးအမြတ်မယူသောအကျိုးစီးပွား Group မှ
ငါးဖမ်း / Holmes fiskevårdsområde
Holmes သစ်တောများကနေသဲလွန်စအစီရင်ခံစာ Leave
Holmes အတွက်နေရာထိုင်ခင်း Advertise
ကျနော်တို့ Holmes ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအချိန်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်
Loviken အတွက် Cabin Log
Drive ကို Berget
ရှိုအတွက် Fantastic တည်နေရာ
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူ nice villa
အိမ်ခြံမြေဈAnundgård, Holmes - "ဟောငျးAffär'n"
Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်းနှင့် Holmes စီရင်စုနယ်
Holmes နှင့် ပတ်သက်.
Holmes နှင့် ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေးရုပ်ရှင်
Holmes ရုပ်ရှင် – အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်
Holmes အတွက် Advertise
← လွန်ခဲ့သော နောက်တစ်ခု →
ဆန္ဒပြပွဲတနင်္ဂနွေ 10/11 19:00: ခိုလှုံခွင့်နေထိုင်ရန်, ဘရော့ဒ်ဘန်းများနှင့် Mack
အပေါ် Posted 8 နိုဝင်ဘာလ, 2013 အားဖြင့် Holmbygden.se
မကြာသေးမီကာလ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အရာအားလုံးကိုဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးခွန်းများနှင့်စိုးရိမ်မှုများ evokes. Holmbygdens Utveckling vill med ett stormöte ge möjlighet att ställa frågor och få information kring:
သစ်ကိုဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်း၏သရေကျ – Stefan Maina Information.
သစ်: အကြောင်းကို info “ဒေသခံအသက်ကယ်” – SMS ကိုအရေးပေါ်နှိုးစက်မှတဆင့် utlarming.
အချိန်နှင့်နေရာ: တနင်္ဂနွေ 10 Nov kl 19:00 Församlingshemmetအပေါ်.
Next ကိုတပတ်, ဆှီဒငျရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ဒါခေါ်အဆုံးသတ်စစ်ဆေးခြင်း “Skandalhusen” ကိုယ့် Holmes. စက်တင်ဘာလကတည်းကကြောင့်ညဥ့်မှနံနက် မှစ. ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပြီးယခုအခါကုမ္ပဏီထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များသူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေး. ယင်းဂုဏ်သတ္တိများအတည်ပြုကြသည်နှင့်တစ်ဦးစာချုပ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားလျှင်ဘတ်စ်ကားဆိုနေ့ရက်အချိန်စတင်နိုင်ပါသည်.
ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Sundsvall မြူနီစီပယ် Holmes အတွက် HBU တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး
ဆောင်းဦးစဉ်အတွင်း HBU လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့် Sundsvall ၏စီးတီးသို့ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့. ရက်သတ္တပတ်အဘို့, တုန့်ပြန်မှာအားလုံးမဟုတ်ခဲ့. အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းမှာတော့သို့သော်ဌာနကအကြံပြု Favi အစည်းအဝေးတစ်ခုဆှီဒငျရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူရာအရပ်ကိုယူမယ်လို့ Sundsvall ၏မြို့တော်စည်ပင်က. HBU Holmes စီရင်စုနယ်အိမျကသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်. ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်စည်ပင်သာယာအခြေအနေကသူတို့အဘို့အကြီးနှင့်အ HBU ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဖော်ပြထားပုံကိုရှင်းပြခဲ့. ဟုအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့တနင်္ဂနွေအစည်းအဝေးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်.
ဆွီဒင်ရေဒီယိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့် Sundsvall ၏စီးတီးနှင့်အတူစည်းဝေးပြီးနောက် HBU ရဲ့သမ္မတ Niklas Wikholm အင်တာဗျူး. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော listen (အချိန်က 00:19:21).
(တစ်ခုလုံးကို Holmes ၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်ခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းမှာစတင်သည် 00:09:03)
သငျသညျအဖြေကိုလိုအောက်ကမှတ်ချက်တွေအပိုင်း၌သင်တို့၏မေးခွန်းများနှင့်အတှေးအရေးထား, သင် HBU နိုင်, Stefan Maina သို့မဟုတ်ခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ကွိုတငျပွငျဆငျ.
ဒီ entry အတွက် posted ခဲ့သည် သတင်း အားဖြင့် Holmbygden.se. bookmark ပု permalink.
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ. တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *
ဂုဏ်ယူစွာစွမ်းအားဖြင့် WordPress ကို